KWENZEKA NTONI NGEKATE & MARINE? - IINDABA
Intaka-yezulu ngamalungu osapho iParadisaeidae iyalela iiPasseriformes. Uninzi lweentlobo ezikhoyo kwiJap eIndonesia iPapua, iPapua New Guinea kunye nejap Australia.
Umzi uneentlobo ezingama-42 kwisigaba se-15. Amalungu eli khaya ngawona maninzi amathuba okuba abonwa ngobuninzi bendoda (uninzi) lwentlobo, ezi-dimorphic ngokwesondo, zihlala zivela kumlomo, amaphiko, umsila, okanye intloko. Amaphiko amakhulu kakhulu.
Isiqendu 5 sasehlotyeni
Imovie ivula noKate, umphengululi omtsha kraca kwiLa Volley re Ballet Academy eParis, ekhangela kakubi i-ft yakhe kuba abafundi bayabulisana ngobungcali.
Sifunda ukuba uvela kwimbali emfutshane eyadlulayo ukongeza kubungcali bokufunda, efumene umntu ngamnye okhuphisanayo kumdaniso eMelika, emva koko sanikwa uMarine, umfazi omncinci wommeli wase-US eFrance, ojonga ngokuchanekileyo ngokufanayo indlela.
Ecaleni kweAkhademi ngumama obaluleke kakhulu ofuna ukuba ajongane naye ukuze abe nakho ukuphumelela ibhaso lonyaka lokufumana isivumelwano kunye ne-elite Paris Opera Ballet. Iintaka zeParadesi ziphela kwiminyaka emithathu kamva, kwaye uKate ngumdanisi owaziwayo we-ballet.
Emva kokusebenza kakuhle okwamenza waphakama, wacelwa nguMarines, owadweba umdaniso eJungle, ubulungu obuphantsi komhlaba awayeye kubo xa wayengumfundi webhaleyi.
umqokeleli werhafu kulu
U-Kate ekugqibeleni uye waphuka kwaye waxolisa kumaMarines ngendlela efanelekileyo awamphethe ngayo, kwaye umboniso bhanyabhanya uphela noKate ebeka iliso kumdaniso we-surreal ngaphakathi kwehlathi ngokusekwe kwingxelo awayeyazisiwe kwindibano yabo yokuqala.
Isiphelo somdlalo bhanyabhanya silungile njengesiphumo esiphakathi kweKate kunye neMarine akunakwenzeka ukuba uthathe isigqibo malunga nokuba ngubani ofanelwe leli bhaso ngokuyintloko. Ngenxa yoko, uKate ekugqibeleni ufumana ibhaso, nangona kunjalo ayisiyiyo mpumelelo njengoko okhuphisana naye obalaseleyo, uMarine, eshiya ugqatso.
Inokuba sisibongo sokuba uKate, owathi wamkela ekugqibeleni, ubonakala engonwabanga xa aba-2 behlangana kwakhona emva kweminyaka emithathu. Kwelinye icala, iiMarines zibonakala ngathi ziyekile ukukrakra emva kokuyeka iAkhademi.
Ngoku ubonakala engakhethi cala kwaye uzonwabisa ngomdaniso wovavanyo kumalungu angaphantsi komhlaba. Xa isenzeka, nangona kunjalo, amandla kaMarine noKate anomdla wokungqina.
kwenzeke ntoni kwintombazana yezithuthi kwisiteshi se-4
Ngelixa kukho abalinganiswa abohlukeneyo abaphuma kwaye bedlala, njengomdanisi weenkwenkwezi onomtsalane uFelipe (uDaniel Camargo) kunye notitshala ofunekayo uMadame Brunelle (uJacqueline Bissett, obandayo ngokupheleleyo), iiNtaka zeParadesi zibonelela ngabafazi babo ababini abaphambili.
Ulwandle luhleli luza kujongana nokusilela komntakwabo, u-Ollie; Wayengumlingisi wakhe wokudanisa kwaye ukuba amarhe anokukholelwa, babelana ngesibophelelo esinzulu ngokwenene. Nangona eqala ukubona uKate njengomntu okhuphisana naye okokugqibela, amaMarines aqala ngokukhawuleza ukuxhomekeka kuye njengemfihlo yabo entsha.
Umbuzo osentliziyweni yeentliziyo yeentaka zeParadesi ujika ube ngaba: ngaba uyakhathala ngoKate ukuba ungubani, okanye ufuna omnye u-Ollie? UFroseth uchaza umzabalazo wangaphakathi waseMarine kakuhle, ukusuka kwintlungu yakhe esisigxina ukuya kwinzondo yakhe kwicala likamama notata wakhe.
Ubetha kakuhle phakathi kokungakhuseleki kunye namandla anzima, ekhonza ukwenza uLwandle ukuba lube lolona mntu unyanzelekileyo kwiiNtaka zeParadesi.
zingaphi iziqendu ezikwixesha lesi-4 le-wynonna earp
Ukufa kabuhlungu kuka-Ollie kumisela isimilo soLwandle kumdlalo bhanyabhanya omninzi, kwaye kwimovie bhanyabhanya sifumanisa ukuba uyazibeka ityala, naye. ngokusweleka kwakhe.
Umama waselwandle kubonakala ukuba wabamba uMarine no-Ollie kwigumbi elabelana ngesondo emva kokuba bebancinci, emva koko umfana omncinci wakhula waba neentloni kangangokuba waqala ukusebenzisa amayeza waphela etsiba ebhulorhweni. Gaya.
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba amaMarines athi uKate ngeenyembezi, mhla u-Ollie azinikezela ukuzibulala, uzama ukumthiya igama, nangona kunjalo iiMarines aziphenduli. Kumyalezo wakhe we-voicemail, u-Ollie ubonise ukuba ulibele malunga nokuhlala kwakhe.
Oku kuthatha umthwalo kuLwandle oluchaza ukuba kutheni ezibeka ityala ngokusweleka kwakhe. Kuhleli kungacaci ukuba kwenzeka ntoni phakathi kuka-Ollie noLwandle, nangona kunjalo uphethe ngokufa kwakhe.
Nangona kunjalo, umdanisi ekugqibeleni uyakwazi ukuphazamisa umjikelo we-ache. Ufezekisa oku ngokushiya i-ballet eqhelekileyo.
Izigaba: Umqala Hollywood Amazon-Prime
isanti yedola Cove unxibelelwano
I-nichole jacklyne net efanelekileyo
benza ntoni oomama bomdaniso
Iminyaka emitsha yeeyure zosuku lukaMcdonald
Ngaba iMcDonalds ivuliwe ngoJulayi 4